Isifinyezi se-Bulk URL – Chofoza lapha ukuze uqale ukunciphisa i-URL.
Chofoza lapha ukuze uqale ukunciphisa i-URL.
Isifinyezi se-URL esinama-analytics, ukukhomba kwe-geo, ukulandela ngomkhondo isixhumanisi, i-API, ukunqanyulwa kwesixhumanisi ngobuningi kusuka kufayela, nokuvimbela ukukhwabanisa kusuka ezinhlelweni ezihambisanayo.
Isifinyezi se-Bulk URL
Uma udinga ukunciphisa ama-URL ngenqwaba, ngokwesibonelo, finyeza izixhumanisi eziningi, ezingamakhulu, noma eziyizinkulungwane ngasikhathi sinye, landela izinyathelo ezilandelayo:
Bhalisa i-akhawunti ku-Shortest.link URL shortener.
Dala ifayela le-.csv nge-Excel.
Ikholomu yokuqala kufanele ibe nezixhumanisi ezinde. (Ithuluzi le-Antifraud “_clicktime_” lisavunyelwe ukusetshenziswa njenge-SUBID kuzixhumanisi ezihambisanayo ukuvimbela umkhonyovu ngamanethiwekhi wobulungu. Uhlala njalo ungaqinisekisa uma ukuhlolwa kokuchofoza ngesikhathi esifanele kuvela kumbiko wobulungu).
Ikholomu yesibili iyakhethwa, iqukethe ama-URL amafushane. (Izijobelelo zokuqondisa i-Geo -us, -cn, -fr, njll. Zisavunyelwe ukusetshenziswa ukuqondisa kabusha ithrafikhi kuzixhumanisi ezinde ezahlukahlukene ngokwezwe lezivakashi).
Ikholomu lesithathu lingakhethwa, liqukethe izihloko.
Ngena ekhasini lomlawuli.
Chofoza isixhumanisi “Ngenisa ngobuningi bese ufushanisa”, bese uchofoza u- “Khetha ifayela” (noma uhudule bese uphonsa ifayela kule nkinobho), bese uqhafaza ku- “Layisha”.
Linda imizuzwana eminingana.
Uma kuvela iphutha elingu-502, ungakunaki lokho. Vele uchofoze inkinobho ethi “Emuva” esipheqululini, bese uqhafaza ku- “Admin interface”, bese ubuyekeza ikhasi kaningana.
Ngiyacela, inombolo ephezulu yezixhumanisi ongakwazi ukuzifinyeza ngasikhathi sinye zingama-5000. Ngiyacela, bhala ukweseka.
Akuvunyelwe ukusebenzisa isinqamuleli sesixhumanisi esiningi sogaxekile nganoma iyiphi indlela.
Izixhumanisi ezifushanisa ngobuningi kumawebhusayithi amadala, ikhemisi, namakhasi angekho emthethweni awavunyelwe.
Uhla lwemibhalo lwezifinyezi ze-URL
Imikhiqizo yokuxhumanisa emfushane yezimfuno ezesabekayo
Khetha izici ezidingekayo
Ukunciphisa i-URL ngaphandle kwerejista
Ukufushaniswa kwe-Bulk URL
I-URL emfushane ngokwezifiso
Ukuvimbela ukukhwabanisa kusuka ezinhlelweni ezihambisanayo
Features: Ukulandelela isixhumanisi
Fushanisa i-URL ngaphandle kwezikhangiso
Chofoza lapha ukuze uqale ukunciphisa i-URL. Proudly powered by WordPress